1,500 ပို့စ်များ! လူမှုမီဒီယာကြီးကြပ်မှုသို့! | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 6, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါသုံးပြီးခဲ့သည် အင်တာနက်မော်ကွန်းတိုက် Wayback စက် ငါသည့်အခါဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားယနေ့ည တရားဝင် blogging စတင်ခဲ့သည်။ ငါကဆဲဆဲဘလော့ဂ်စတင်ခဲ့သူတွေကိုဘလော့ဂါများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှောင်းပိုင်းတွင် bloomer ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်နေဆဲဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်အခါ ဂျာနယ်.
ကျွန်ုပ်၏အစောဆုံး blogging သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် Ryze (သတင်းစာဒေတာဘေ့စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နှင့်အတူ (Ryze သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ အဆင့်မြှင့်တင်မှုရှိမရှိမသေချာပါ!) ။ ငါထို့နောက်မှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ဘလော့ဂါ စပြီးရေးသားခဲ့သည် Doug ရဲ့ Rant.
အဆိုပါ ကျွန်ုပ်၏ WordPress ဘလော့ဂ်တွင်ပထမဆုံး blog post ငါ့ကိုနံနက်စာစားအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူ Mountain Dew ကြော်ငြာအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြော်ငြာကမည်သူမဆိုဘလော့ဂ်တစ်ခုစတင်ရန်လှုံ့ဆော်သင့်သည်။
ငါ blogging ခဲ့ကြသောရှေးရှေးမှာပြန်ကြည့်အဖြစ် ကောင်းစွာ ကျော်လွန်aဆယ်နှစ်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သက်တမ်းတိုတောင်းသောကျွန်ုပ်၏ကိန်းဂဏန်းများကိုရရှိခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
Martech Zone အပေါ်ထိပ်ဆုံးဘလော့ဂ် ၅၀၀၀ တွင်တစ်သမတ်တည်းရှိနေသည် Technorati.
Martech Zone ယင်း၌ရှိ၏ Power က 150 စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်များအတွက်။
Martech Zone Alexa တစ်ခုလျှင်ထိပ်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက် ၁၀၀၀၀၀ တွင်ဆက်လက်ရှိနေသည်။
ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုလာရောက်တဲ့လူပေါင်း ၄၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်။
ငါ၏အအသစ်သော new ည့်သည်များ၏ 40% ကျော်ကဒီကနေရ Google.
ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ၏အနည်းဆုံးအားစိုက်ထုတ်မှုနှင့်မည်ကဲ့သို့အလိုအလျောက်မည်သို့ပေါင်းစည်းနိုင်ပုံကို ဆက်လက်၍ ပညာပေးမည်။
Tags: Doug ရဲ့ rantဘယ်လောက် blog postများသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အလိုအလျောက်ပေါ်မှာလူမှုမီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုကိုWayback စက်